Creative Writing » သူမရဲ့သူမ (၂)	6
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: စိတ်ဝင်တစားဖတ်လာပြီးမှ ဆက်ရန်တဲ့…. ဆက်ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်လို့။
Tawwin Pan says: ဟုတ်ကဲ့ စာကအရမ်းရှည်လို့ ဖြတ်ထားတာပါ။ စိတ်ဝင်တစားဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အရက် အရမ်းသောက်တတ်ရင် စိတ် ကျ စိတ် ကြွ
Tawwin Pan says: အခုကတော့ ဘယ်ကစမှားလို့ မှားမှန်းမသိတော့ပါဘူးလေ……နောက်ဆက်ရေးမယ့်ဟာလေးတွေသာ ဖတ်ပြီး အကြံဥာဏ်ပေးပါဦးနော်……………..
Ma Ei says: လူရိုးလူကောင်း အညာသား စီးပွားဦးဆောင် လုပ်နေတဲ့အဖေက ဘာကြောင့်များ အရက်သမားကြီး လုံးလုံးဖြစ်သွားရတာလဲ သူမရယ် အဘိုးပြောသလို အရက်မသောက်ပါနဲ့လို့ သူမများတားခဲ့ရင် ဇာတ်လမ်းလေးများ ပြောင်းသွားနိုင်မလား စဉ်းစားမိတယ်ကွယ်….
Tawwin Pan says: မအိရေ…အဲလိုမျိုးလည်း တားဖို့ကို အခုထိ တခါမှ စိတ်မကူးဖူးသေးပါဘူး။ အခုထိလည်း ရန်ဖြစ်ရင် ဝင်မတားပါဘူး။ အိမ်က ညီမတွေကတော့ အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပဲ တကိုယ်ကောင်းဆန်နေတာများလားလို့လည်း ထင်နေမိပါတယ်။ အခုတော့လည်း သူ့စိတ်နဲ့သူပိုင်းဖြတ်ပြီး အရက်ဖြတ်ထားတာ နှစ်အတော်ကြာနေပါပြီ။